Maxkamadda ICJ oo go'aamisay siday Soomaaliya rabtay - BBC Somali
2 Febraayo 2017
Maxkamadda Cadaaladda ee Qaramada Midoobay ayaa go'aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Xaakimiinta Maxkamadda ayaa u codeeyay kiiska ka dib markii ay ka hadleen sharci ahaanta doodda Soomaaliya iyo diidmada Kenya.
Maxkamadda oo la safatay Soomaaliya waxay meesha ka saartay doodda Kenya ee ah in labada dal ay muranka ku xalliyaan heshiiskii ay horey u wada saxiixdeen.
Hadda kiiska ay Soomaaliya gudbisay ayaa sii socon doono muddo sanado ah, waxayna ugu dambeyn go'aan ka gaari doontaa dalka iskaleh qeybta badda ee lagu muransan yahay.
Wali lama sheegin goorta ay dacwaddu billaaban doonto.
Xeer ilaaliyaha guud ee Kenya Githu Muigai ayaa sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay dhageysiga dacwaddan oo aan wali wakhti loo qabanin.
Dibadbax lagu taagerayo dacwadda badda oo Muqdisho ka dhacay
Maxay ahayd dooda labada dhinac?
Soomaaliya aya horay ugu gacan seyrtay soo jeedintii Kenya ee ahayd in heshiiska Is-afgaradka uu yahay mid suurtagelin karta inay labada dal ku heshiiyaan xadeynta badda.
Image caption Qareennada Soomalaiya matalayay
FG: Warkan wuxuu ka duwan yahay war aan horey u sheegnay oo ahaa in maxkamaddu ku raacday diidmadii Kenya ee ahayd in dacwadda aan la qaadin, waana saxnay haatan.
Halkan ka daawo afar qodob oo ay soo gudbisay dowladda Kenya oo ku aadan dacwadda badda ee
Maqal Dacwadda Badda: Soomaaliya oo maanta jeedineysa doodda ugu dambeysa